လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ KPI ကို ဘာကြောင့်သိထားဖို့လိုအပ်ပါသလဲ? - Aerial Yangon
ဒေသခံမီဒီယာစျေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု & အတိုင်ပင်ခံ
ရုပ်ရှင်၊ ဓာတ်ပုံ၊ လိုဂိုဖန်တီးမှု
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ KPI …
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ KPI ကို ဘာကြောင့်သိထားဖို့လိုအပ်ပါသလဲ?
တစ်ကယ်လို့ သင်က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုပါစို့။
သင်ဟာ KPI ရဲ့ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာသိထားသင့်ပါတယ်။
KPI ဆိုတာ Key Performance Indicator ပါ။
သင်ဟာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ Marketing Campaign တွေဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်သလဲ၊ သင့်ရဲ့ Marketing Objectives တွေကဘာလဲ ဆိုတာနှင့် ပတ်သတ်ပြီး KPI နဲ့တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။Facebook ထဲမှာ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Information တော်တော်များများကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ KPI ပါ။စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများရဲ့ ပြသာနာက ဒီလို ကျယ်ပြန့်တဲ့ KPI ပေါ်က်ို မှားယွင်းစွာ အာရုံစိုက်မိနေခြင်းပါ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဒီအရာတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ အာရုံထွေပြားသွားပြီးတော့ မိမိရဲ့ Marketing Objectives တွေကို မရရှိဘဲ သေချာမသိဘဲနှင့် ရေရှည်မှာ မရပ်တည်နိုင်ကြတဲ့ ပြသာနာတွေကို ကြုံတွေ့ ကြရပါတယ်။ဒီလို အာရုံစိုက်နေခြင်းမဖြစ်ရအောင် ကျွန်ုပ်ပြောပြပါ့မယ်။
သင့်ရဲ့ Objectives ကို ရောက်ရှိဖို့ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ တစ်ကယ်လို့ သင့်ရဲ့ Marketing Objectives ဟာ Inquiries ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ Like တွေ Comment တွေအပေါ် အာရုံစ်ိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ တစ်ကယ်တမ်း အာရုံစိုက်သင့်တာက တစ်ကယ်တမ်း မိမိ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ Marketing Budget နဲ့ Inquiries တွေ ဘယ်လောက်များများ ဝင်သလဲ၊ တစ်ကယ်တမ်း ရရှိလာတဲ့ Lead တွေကရော Quality Lead ဖြစ်ရဲ့လား၊ မိမိလိုချင်တဲ့ Customer တွေရရှိရဲ့လား စတာတွေကို အာရုံစိုက်ပြီးတော့ မိမိရဲ့ KPI ကို တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။
ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများPrev post
အဘယ်ကြောင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမိမိတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် WORDPRESS ကိုအသုံးပြုသင့်ပါသလဲ?Next post
ကျွန်ုပ်တို့၏ Aerial Yangon website မှကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို Aerial Yangon website မှာ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ သိရှိလိုသည်များကို ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ email ဖြင့်ဖြစ်စေ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် Phone no: 09-451663606 Email: Info@aerial-yangon.com
Aerial Yangon Co. , Ltd
ရုံးလိပ်စာ - အမှတ် (၄၄၆)၊ သီဟသူလမ်း၊ ၁၁ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကုန်။
+ 95 (0)9451663606,9898819468
Copyright © Aerial Yangon